ကွန်ပျူတာ၏လုံခြုံအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ဦးကနည်းနည်း - ဆောင်းပါးများ - 2019
မကွန်ပျူတာမှာလုံခြုံဆုံးအလေ့အကျင့်အလုပ် - သငျထူးဆန်းတဲ့က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောခလုတ်နှိပ်သည်ကိုသင်တို့သိသလား? အတော်များများကကွန်ပျူတာပြဿနာများ, ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်တူသောရုံအလွန်အကျွံသိချင်စိတ်၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ကောင်းပြီ, ငါအလှည့်အတွက်, စာဖတ်သူတွေပဲစပ်စုသောအရာကိုရာခိုင်နှုန်းဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိရလိမ့်မယ် (သင်ကသင်၏ရှာဖွေရေးကနေရလျှင်, မည်သည့်ကိစ္စတွင်အတွက်ဆောင်းပါးအမည်တပ်ထားသောတစ်ခလုတ်ကိုကြောင်းပြောပြ လျှို့ဝှက်ချက်သော့ချက်).
အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲတွေရဲ့အခွင့်အလမ်း minimize နိုင်ရန်အတွက်ကွန်ပျူတာ၏လုံခြုံအသုံးပြုမှုအကြောင်း
သင်သည်အဘယ်သို့အခမဲ့နှင့်မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲအဘို့ကို download လုပ်လိုလျှင်ဖြစ်ပျက် - သင်ဤအကြောင်းကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာရှာဖွေနိုင်သည်, အများဆုံးမကြာခဏစုံစမ်းမှုမေးတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Computer မရ Android မပ လပငမယ အလယဆန အစလငဆ Phishing Tool အၾကင (အောက်တိုဘာလ 2019).